Gwa anyị gbasara azụmahịa gị. LPH Kuznetsov, Krasnoyarsk Territory - magazin "Usoro nduku"
Na July 17, owuwe ihe ubi nduku na ugbo Kuznetsov (obodo nta Shushenskoye, Krasnoyarsk Territory) bidoro.
Ugbo ahụ anọwo na-akọ nduku ruo afọ 10. N’afọ a, enwetara hectare 40 maka ihe ọkụkụ a.
Ugbo ala n'onwe ya na-eto ụdị Bellarosa, Colette, Vineta ma na-atụ anya inweta ezigbo owuwe ihe ubi: ụkọ mmiri ahụ, nke metụtara ụfọdụ mpaghara Siberia, emetụtaghị Ókèala Krasnoyarsk. Mmiri ozuzo zuru oke.
Tags: nduku na-etoÓgbè Krasnoyarsk
A na-akwado mbipụta ọzọ ebipụta akwụkwọ "Poteto Sistem" maka ịhapụ ya
Thelọ ọrụ "Melagro" nyefere Europe ruru 5,5 puku nduku na Europe n'afọ gara aga
Ọ dị egwu banyere nduku. Asọmpi onyonyo nke ndị Britain